Haqa: ‘Namoota manni murtii mirga wabii kabajeef poolisiin gadhiisuu dide | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ December 31, 2020 February 25, 2021
Namoonni dhaabbilee siyaasaa ABO fi KFO keessatti socho’aniifi kan hokkora ajjeechaa Art. Hacaaluu Hundeessaan booda dhalatee walqabatee hidhaman gariin manni murtii mirgi wabii isaanii akka eegamuuf murteessuus poolisiin isaan gadhiisuu dhabe jechuun abukaatonni isaanii komatan.
Mirgi Dr Huseen Kadirif seeraan kenname poolisiin sarbamaa jira jechuun abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo himaniiru.
“Namni tokko sa’aa 48 ol ajaja mana murtiin ala hidhamee taa’uu hin qabu” kan jedhan Obbo Kadir Bulloo, “kun mirga seerri kenneef sarbuudha. Poolisiin ajaja mana murtii kabajuu qaba” jedhan.
Manni Murtii Aanaa Magaala Laga Xaafoo Laga Daadhii Sadaasa 16 bara 2013 ture Yunivarsiitii Finfinneetti diinii Kollejjii Barnootaa fi Qorannoo Amalaa kan ta’an Dr. Huseen Kadir wabii qarshii 10,000nin hidhaadhaa akka gadhiifaman kan ajaje.
Haa ta’uu malee, maatin Dr Huseen qarshii mirga wabiif manni murtichaa ajaje qarshii 10,000 kaffalanii ajaja mana murtichaa Komishinii Poolisii Oromiyaatti galchanis Dr Huseen osoo hin gadhiifamin yeroo ji’a tokko olif hidhaa turu abukaatoon isaanii himu.
“Poolisiin ajajni mana murtii erga isa gaheen booda mana murtiif deebii hin kennine. Isillee hin dhiyeessine” jedhan.
Dr Huseen amma dura Godina Baalee mana murtii aanaa Agaarfaatti dhiyaatanii Abbaan Alangaa galmeen isaanii akka cufamu waan gafateef manni murtii akka gadi dhiifaman ajajullee osoo gadi hin dhiifamiin gara Finfinnee geeffaman.
Haaluma walfakkaatuun Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa hogganoota ABO kan ta’an Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa Jimaata darbe Mudde 25 bara 2020 bilisa jedhee akka gadi dhiifaman murteessullee poolisiin gadi dhiisuu dide jechuun abukaatoon isaanii BBC’tti himaniiru.
Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa du’a artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee karaan akka cufamu, qabeenyi akka barbadaa’u, namni akka walitti bu’u bilbilaan ergaa dabarsitaniittu jedhamuun labsii farra shororkeessummaan himati irratti baname akka ture himu Obbo Tuulii Baay’isaa.
Himata kana kan bane Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa yoo ta’u, dhimmicha ilaalaa kan ture Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa mirga wabii eegeefi Sadaasa 14 bara 2020 gadi dhiifamanii turan.
Haa ta’u malee, guyyoota muraasa booda akkaataa beellama isaaniin mana murtiitti wayita argaman poolisiin irra deebiin to’annoo jala isaan oolche jedhan.
Manni murtii maaliif irra deebiin akka to’annoo jala oolfaman gaafatee jennaan ‘gara biyya alaatti baduuf akka ta’e odeeffannoon na gahe’ jechuun poolisiin deebii kennuu himu Obbo Tuuliin.
Manni murtii kun sirrii akka hin taane himuun irra deebiin akka gadi dhiifaman ajajullee poolisiin gadi hin dhiisne jedhan.
Jimaata darbe manni murtichaa himata isaanirratti baname ilaalee, galmee qoratee, ragaas erga dhaggeeffateen booda, ‘himatni isaanirratti baname ragaadhaan hin deeggaramne’ jechuun bilisaan akka gadi dhiifaman murteesse.
Haa ta’u malee poolisiin ajaja mana murtii diduun namoonni kun lamaan hanga har’aatti waajjira poolisii aanaa Sabbataa Hawaasitti to’annoo poolisii jala jiraachuu himan.
Namoonni kun lamaan kutaa dheerinni fi bal’inni isaa meetira afur (kaaree 16) taate keessatti hidhamtoota yoo xiqqaate nama 20 waliin hidhamanii akka jiraniifi miidhamaa jiraachuu himu Obbo Tuuliin.
Hogganooti ABO kaan kan akka Obbo Mikaa’el Booran, Kennasaa Ayyaanaa fi hidhamtoonni kaan kan akka dargaggoo Obsaa Abdiisaa fi Abduljabbaar Umar mirgi wabii isaanii eegameefi qarshii wabiif ta’u qabsiisanis poolisiin gadi dhiisuuf hayyamamaa hin taane jedhu abukaatonni.
Namoonni kunneen amma dura mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaatanii irra deddeebiin mirgi wabii eegameefi turuus gadi hin dhiifamiin turuu dubbatu.
Ammaan taana waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii akka jiran Obbo Tuuliin BBC’tti himaniiru.
Namoota kunneen poolisiin ajaja mana murtii kabajee gadi dhiisuu diduu isaa irra deebiin mana murtii aanaa Magaalaa Galaanitti akka iyyatanii fi manni murtichaas poolisiin magaalaa Galaan namoota kana gaafa Mudde 27 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyeessu ajaja kennee jira jedhu.
‘Olaantummaa seeraa rakkoo keessa galcha’
Manni Murtii aanaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii Dr. Huseen kaleessa Mudde 21 bara 2013’tti akka dhiyeessu ajajus poolisiin kaleessas hin dhiyeessine, hidhaarraayis hin hiikne jedhu Obbo Kadir Bulloo.
“Kuni ajajni mana murtii kabajamaa akka hin jirre agarsiisa. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru jechuun immoo olaantummaan seeraa biyya kana keessatti rakkoo keessa galaa kan jiru fakkaata” jechuunis himan.
“Poolisiin ajaja mana murtii hin kabaju yoo ta’e, ajajni mana murtii yoo hin raawwatamne abdiin nama hidhamee maal akka ta’e kanarraa hubachuun danda’ama. Kanaaf adeemsi kun sirrii natti hin fakkaatu ” jedhan.
Namooti abbaan alangaa ‘himachuuf wanti na dandeessisu hin jiru galmeen cufamee haa gadi dhiifaman’ jedhe jiraachuu kan himan Obbo Tuulii Baay’isaa, “poolisiin hin gadhiisu jedhee humnaan qabatee taa’uun waan rakkisaadha” jedhu.
“Kuni baruumsa seeraa fi hojii mana murtiis gatii dhabsiisuudha” jedhan.
“Olaantummaa seeraa, bilisummaa mana murtii waan hunda kan diigu waan ta’eef mootummaan dhimma kana xiyyeeffannoon ilaaluu qaba jedheen yaada” jedhu.
Namni hojii seeraa irraa akka abdii kutatu, olaantummaa seeraattis akka hin amanne taasisa, abbootiin seeraallee hojiin keenya gatii hin qabu jedhanii akka isaan yaadan godha jedhu.
BBCn dhimmicharratti yaada Komishinii Poolisii Oromiyaa argachuuf Komishinara itti aanaa komishinichaa kan ta’an Girmaa Galaanitti irra deddebin bilbillus hin milkoofne.
Akkasumas mana hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne.Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa amma dura Oromiyaa keessatti ajaji mana murtii hojiirra oolfamuu dhabuun akka isa yaaddessu ibsa baaseen beeksisee ture.
Komiishinichi ibsa Sadaasa 7 bara 2013 baaseen manni murtii mirga wabii eegeefi poolisiin gadi dhiisuu diduun haqa kan dabsuu fi mirga namoomaas kan sarbu waan ta’eef ariitiin haa gadi dhiifaman jedhee ture.
Komiishinichi yeroos dhimmicha irratti aanga’oota olaanoo mootummaan naannoo Oromiyaa waliinis akka mari’atu himee ture.
Sorce BBC NEWS AFAAN OROMOO: ‘Namoota manni murtii mirga wabii kabajeef poolisiin gadhiisuu dide’ – abukaatota